Sida loo xisaabiyo Qiimaha Nolosha ee Isticmaalaha Moobilkaaga | Martech Zone
Monday, August 22, 2016 Isniin, April 4, 2022 Douglas Karr
Waxaan leenahay shirkado bilow ah, shirkado la aasaasay, iyo xitaa falanqeyn heer sare ah iyo shirkado casri ah oo noogu yimaada caawimaad si ay u kobciyaan ganacsigooda internetka. Iyada oo aan loo eegin baaxadda ama casriga, markaan wax ka weydiinno waxa ay yihiin helitaanka kharash-kasta iyo qiimaha nolosha (LTV) macmiil, badiyaa waxaan la kulannaa indho madhan. Shirkado badan ayaa xisaabiya miisaaniyada si fudud:
Aragtidan, suuqgeynta suuqgeynta waxay u socotaa safka kharashka. Laakiin suuqgeyntu maahan wax kharash ah sida kiradaada oo kale investment waa maalgashi ay tahay inuu ka shaqeeyo kobcinta ganacsigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad isku daydid inaad xisaabiso in kharashka si aad u hesho macmiil cusub ay tahay qaddar doollar oo cayiman, ka dibna faa iidadu tahay dakhliga aad ku gaadhay iibsashadooda. Dhibaatada taasi waxay tahay in macaamiisha caadi ahaan aysan hal iibsi sameyn. Helitaanka macmiilku waa qaybta adag, laakiin macaamil faraxsan ayaan si fudud hal mar wax u iibsan oo uga tagin - wax badan ayey iibsadaan oo ay sii dheeraadaan.
Waa maxay Qiimaha Nolosha Macaamiilku (CLV ama CLTV) ama Qiimaha Nolosha (LTV)?
Qiimaha inta uu nool yahay macaamilku (CLV ama inta badan CLTV), qiimaha macaamilka inta uu nool yahay (LCV), ama qiimaha waqtiga nolosha (LTV) waa macaashka la xisaabiyay ee macaamilku siin doono shirkaddaada. LTV kuma koobna macaamil ganacsi ama qaddar sanadle ah, waxaa ku jira macaashka lagaaaray muddada xiriirka aad la leedahay macaamilka.
Waa maxay qaaciddada lagu xisaabiyo LTV?
LTV = Qiimaha Nolosha
ARPU = Celceliska Dakhliga Qofka Isticmaala. Dakhliga waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado kharashka dalabka, dakhliga ku-qornaanta ku-saleysan, iibsashada barnaamijka, ama dakhliga xayeysiinta.
Cuncun = Boqolkiiba macaamiisha ayaa lumay mudo cayiman. Codsiyada ku saleysan rukunka badanaa waxay sanadle u yihiin dakhligooda, xaraashka, iyo kharashyada.
Haddii aad horumarinaysid codsi mobilo ah, waa kuwan macluumaad ku saabsan Dot Com Infoway - Xisaabi Qiimaha Waqtiga Nolosha (LTV) ee Isticmaalayaasha Abkaaga ee Magacaabista iyo Guusha ballaaran - taasi waxay ku siinaysaa socod socod ah oo ku saabsan cabbirka LTV-ga isticmaalaha barnaamijkaaga moobiilka. Waxay sidoo kale bixisaa habab qaar si loo yareeyo buurnida loona kordhiyo faa'iidada.
Shaki kuma jiro xaqiiqda ah in dad aad iyo aad u tiro badani intabadan wakhtigooda internetka ku qaataan barnaamijyada moobilada. In kasta oo ay tani macnaheedu noqon karto isticmaaleyaal badan oo ku saabsan barnaamijkaaga, xaqiiqdii macnaheedu maahan in dhammaan isticmaaleyaashaadu ay faa'iido yeelan doonaan. Sida runta u ah moodooyinka ganacsiga badankood, 80% dakhliga wuxuu ka yimaadaa 20% isticmaale. Cabbiraadda LTV ee isticmaalayaasha ayaa ka caawin kara barnaamijyada soosaarayaasha inay yareeyaan adeegsadayaashooda ugu fiican ayna abuuraan dalabyo iyo dallacsiinno si loogu abaalmariyo daacadnimadooda si kor loogu qaado haysashada Raja Manoharan, Dot Com Infoway
Markaad fahanto qiimaha nolosha macaamiishaada, cabir heerkaaga qulqulka, falanqee qiimaha uu ku kasbado macaamil, waad fahmi doontaa maalgashiga aad samaynaysid iyo celceliska celinta maalgashigaas.
Kadib waxaad ku hagaajin kartaa mid ama dhammaan doorsoomayaasha. Waxaad u baahan kartaa inaad kordhiso qiimaha adeeggaaga si aad u ilaaliso faa'iido caafimaad leh. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad maalgashi badan ku sameyso adeegga macaamiisha si aad u sii haysato macaamiishaada muddo dheer isla markaana aad u kordhiso dakhliyada barnaamijka ama muddada-dheer Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka shaqeyso sidii loo yareyn lahaa kharashka helitaanka macaamiisha iyadoo loo marayo xeelado dabiici ah iyo u doodid. Ama waxaad ogaan kartaa inaad dhab ahaantii ku qarashgareyn karto lacag badan istaraatiijiyadaha helitaanka lacag bixinta.
Tags: xisaabintadillaacheerka hoos u dhacaCLTVCLVkharashka iibsigahelitaanka macaamiishahaynta macaamiishaTansaniadhibic com macluumaadkaformulasida loo xisaabiyo ltvinfographicLTVapp mobilebarnaamijka mobilada ltvsuuqgeynta barnaamijka mobiladamobi app roiwaa maxay ltv